Taariikhda My Butros » Top US Cities for Women Single
Waxa jira arimo gaar ah in meel dhigi habboon yihiin haweenka hal; meelaha weyn in cida ka, shaqooyinka iyo sidoo bixin, guys hal wanaagsan raadinaya oo xiiso leh, Sida xaqiiqada ah cunto caafimaad leh waa qaar iyaga ka mid ah. The magaalooyinka haweenka, kuwaas oo ay doortaan in ay ku nool yihiin waa in ay leeyihiin inta badan arrimo kuwa haddii aan dhan. Liiska magaalooyinka US sare loogu tala galay dumarka ee aad ka raadi hoose doonaa, soo diyaarisay fiirsaneysa arrimo kala duwan oo ay ka mid.
1. Chicago: Halkan, Haweenka raaxeysan karaa qaab nololeed ee magaalada kaamil ah; waa magaalo dhab ah oo firfircoon, laakiin ma aha kuwa iskibriya sida City New York. Chitown, sida dadka deegaanka ay si qurux tixraac magaalada sida, waa xarun quruxda dabiiciga ah, dhaqanka iyo taariikhda. Marka aad ku sugan tahay magaaladan, kaliya aad nacayaa in ay ka baxaan; waa ku raran yihiin xaafadaha rayn iyo xeebaha qurux badan.
Sidaas, sida wanaagsan yahay Chicago saxda ah ee haweenka hal? Oprah Winfrey, Haweenka kaliya ee ugu damaashaaday ee Dunidan, ku nool halkan; taasi xaqiijin in magaalada ay tahay mid xiiso leh oo ku filan si aad u nooshahay.
2. Los Angeles: Haddii aad rabto in ay helaan nolol si buuxda ah sida naag hal, waxaad ka fiirsan kartaa nool Los Angeles. Dalkan asalka ah waxaa ka buuxsamay dadka wanaagsan-raadinta iyo xarrago; sidaa, marka aad halkaan yihiin, helo qof oo xiiso leh inay joognaa leh ma noqon doonto dhibaato.
Oo lagu daray kale oo waa weyn oo magaalada waa xaaladaha cimilada cajiib ah waxay ku raaxaysanayo dhammaan ilaa sanadka u. Cimilada wanaagsan had iyo jeer aad ku dhawri doontaa, jinni oo sare oo waxaad yeelan doontaa tamarta ah in la sameeyo inta badan waqtiga aad shaqo u hesho ka dib. JIRAA. kuu sheegi doonaa wax walba qaban ka aragtida celeb in shopping in la garaaco xeebta.
3. Boston: Haweenka Single heli Boston soo dhawaynta loo eegin da 'kooxeedyada ay ka soo jeedaan. Ardayda, magaalada leeyahay jaamacadaha haybadda leh halkaas oo ay naftooda ku qoran kartaa. Haddii aad jeclaan adeeganayay oo mar walba dooneysaa inay xirtaan wax ka Casrisan, waxaa jira Newbury Street, meel fiican ee iibsato dhar naqshadeeye.
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa ka jecel barqiyey hareeraha iyo raaxaysasho, magaalada ayaa jidadka taariikhi ah oo tiro badan, matxafyada, galleries, shaleemoyinka iyo jardiinooyinka.
4. San Diego: San Diego ayaa had iyo jeer ahaa magaalada martigelin qaar ka mid ah goobaha ugu breathtaking aad abid soo gaarto doonaa. Sidaas, haddii aad tahay hal oo aad rabto inaad qabto qaar ka mid ah daqiiqado qurxiyay noloshaada, waxaad ka fiirsan kartaa dhaqaaqo San Diego.
Magaalada ayaa waxaa la hareereeyey by Badweynta Pacific, lamadegaanka iyo buuraha; tani waxay ka dhigan, marka ay timaado meelaha ku haboon inuu aado shukaansi, waxaa jira fursado ku filan si ay u doortaan ka. San Diego ayaa sidoo kale hoy u tahay Downtown ah run ahaantii ahaanshaha.
5. Las Vegas: Fursadaha aad ku heli la Wadaage ku haboon u badantahay waa tan sarreysa, haddii aad ku jirto Las Vegas. Sida laga soo xigtay 2013 article daabacay Forbes, magaaladan Nevadan leedahay tiradii ugu badnayd ee ragga hal naag kasta hal degganeyn; Naagtii nin walba, magaalada leeyahay 1.34 laakiin. Tani feature ee magaalada ka dhigaysa Las Vegas-galooti 5aad ee liiskan ka mid ah magaalooyinka Mareykanka sare loogu tala galay dumarka hal.
Dhamaan haweenka ka waxaa ku jira hal iyo qorshaynta deberi lahaa mid ka mid ah magaalooyinka kor ku xusan, sida xaqiiqada ah waxaa u sugnaaday nolol ruxid.